Tanàna tsara tarehy ao Badajoz: Avy any Olivenza ka hatrany Alburquerque | News Travel
Louis Martinez | 07/05/2022 16:00 | España, mpitarika
Betsaka ny betsaka tanàna tsara tarehy any Badajoz fa sarotra ho anay ny misafidy izay hatolotray anao. Ny faritanin'i Extremadura dia feno tanàna izay miavaka amin'ny haingony lehibe sy amin'ny tontolony manokana.
Raha ny momba ity farany dia misongadina ny lemaka lonaka amin’ny renirano. Guadiana ary ny sakeliny, ny Guadalupejo, fa koa ny lemaka sy ny tendrombohitra izay, tahaka an'i San Pedro, mbola an'ny Montes de Toledo, na dia akaiky aza izy ireo Portiogaly. Ary, momba ny tsangambato, Badajoz dia iray amin'ireo faritany manana tantara be indrindra manerana an'i Espaina. Faritanin'i Vetton teo aloha, ampahany taty aoriana tamin'ny Lusitania Romana mba hampidirana ao amin'ny fananan'ny Silamo taty aoriana ary, farany, ho ekena ho faritra iray Castilla ao amin'ny Bull Cuts nanomboka tamin'ny 1371. Saingy, tsy azo ihodivirana ny hamela ny sasany ho eo amin'ny fantsona, hasehonay anao ireo tanàna tsara tarehy ao Badajoz.
1 Olivenza, tanàna portogey taloha
2 Zafra, iray amin’ireo tanànan’i Badajoz
3 Llerena, iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Badajoz
4 Jerez de los Caballeros, tanànan’ireo tilikambo dimy
5 Fregenal de Sierra
Olivenza, tanàna portogey taloha
Lalana iray ao Olivenza
Manomboka ny dianay any amin'ny faritra andrefan'ny faritany izahay mba hitantara aminareo ny momba an'io tanàna tsara tarehy io, izay, mahagaga, fa an'i Espaina ihany nanomboka tamin'ny 1801, hatramin'izay dia anisan'i Portiogaly.
Ny mari-pamantarana lehibe dia ny trano mimanda amin'ny Moyen Âge na ny trano mimanda na lapa olivenza, izay mbola mitahiry ny manda lehibeny hatramin'ny taonjato faha-XNUMX, ny tilikambony sy ny vavahadiny toa an'i Alconchel, de los Ángeles, de Gracia ary San Sebastián, ireo roa voalohany voaravaka tilikambo boribory roa. Ao anatiny dia afaka mahita ny fiangonan'i Santa María del Castillo, izay misy alitara tsara tarehy misy ny Hazo Jesse.
Ny faran'ny Moyen Âge koa dia an'ny tetezana ajuda, izay nodidian’ny mpanjaka hanorina Manuel I avy any Portugal hiampita ny Guadiana. Potika ampahany nandritra ny Adin'ny Fandimby, tsy naverina tamin'ny laoniny.
Raha ny momba ny tsangambato ara-pivavahana ao an-tanànan'i Badajoz, dia manoro hevitra anao izahay mba hitsidika ny fiangonan'i Santa Maria Magdalena, naorin'ny mpanjaka mihitsy, ka mamaly ny fomba Manueline, endrika portogey amin'ny fiteny Gothic tara. Ary koa, tokony ho hitanao ny Trano Masin'ny Famindrampo, ny Convent de San Juan de Dios ary, efa eo amin'ny sisin'ny Olivenza, ny sisa tavela amin'ny fiangonan'i Valdecebadar talohan'ny Romanina. Farany, aza adino ny mandeha any amin'ny kianja filalaovana omby, izay efa tamin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX no nanorenana azy, ary mandehandeha eny amin'ny arabe miaraka amin'ny endrika medieval.
Zafra, iray amin’ireo tanànan’i Badajoz
Lapan'ny Andrianan'i Feria, ao Zafra
Na dia tsy nanana afa-tsy dimy arivo sy iray alina teo ho eo aza ny mponina, dia i Zafra no mitana ny anaram-boninahitry ny tanàna, izay nomen’ny mpanjaka. Alfonso XII. Na dia ny silamo aza no nanorina azy tamin'ny fomba ofisialy, dia maro ny sisa tavela tamin'ny trano bongo romanina manodidina azy, ka tena midadasika koa ny tantarany.
Saingy, ambonin'ny zavatra rehetra, ity tanàna Badajoz ity dia miavaka amin'ny tsangambato maro. Anisan'ny mampiavaka azy indrindra Plaza Grande sy Plaza Chica. Ny voalohany dia arcaded ary nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, na dia ny arcades sasany aza dia avy amin'ny faha-XNUMX. Amin'ny alalan'ny antso Andohalambo ny mofo, izay ahitanao ny alitara kely, mifandray amin'ny Plaza Chica, izay ny malaza Zafra Rod. Izy io dia tsanganana izay nampiasain'ireo mpivarotra tao amin'ny vala mba handrefesana ny lahatsoratra.
Tena mahazatra ao an-tanànan'i Extremadura koa izy ireo Lalana Seville ary ny Carnation alley, ary koa ny andohalambo Jerez sy Cubo. Amin'ny lafiny iray, ny Lapan'ny tanàna dia ao amin'ny lapa tranainy iray tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Na izany aza, raha miresaka momba ity karazana fanorenana ity isika, ny tena manan-danja ao Zafra dia ny mahavariana Lapan'ny Dukes of Feria, trano fandraisam-bahiny amin'izao fotoana izao.
Raha ny amin’ireo trano fivavahana ao amin’ny tanànan’i Badajoz, dia tena mahatalanjona Candelaria sy Rosario, samy tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ary koa ny ermitage an'i Belén sy ny tranon'ny Santa María del Valle.
Llerena, iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Badajoz
Plaza of Spain, Llerena
Miaraka amin'ny tanàna tranainy iray nambara ho toerana ara-javakanto ara-tantara, dia anisan'ireo tanàna tsara tarehy ao Badajoz ihany koa i Llerena. Ny ivon'ny nerve dia Kianjan'i Espana, izay ahitanao ilay mahavariana Fiangonan'i Lady of Granada, miaraka amin'ny rihana roa mampitolagaga misy lavarangana. Eo ihany koa ny Lapan'ny tanàna ary eo akaikin'ny loharano iray noforonin'ny mpanao hosodoko Francisco de Zurbaran.
Toy izany koa, tsy maintsy ho hitanao ao amin'ny tanànan'i Badajoz ny azy Rindrina tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo sy ny Zapata Palace, izay nisy ny Fitsarana Inquisition taloha ary manana patio Mudejar mahavariana. Raha ny ara-pivavahana ara-pivavahana, aoka ho azo antoka ny hitsidika ny trano fivarotan'i Santa Clara, izay ao amin'ny tempoliny misy alitara baroque sy sary sokitra an'i Masindahy Jérôme, asan'ny Juan Martinez Montanes. Farany, mankanesa any amin'ny fiangonan'i Santiago sy ny lapan'ny episkopaly.
Jerez de los Caballeros, tanànan’ireo tilikambo dimy
Arco de Burgos, ao Jerez de los Caballeros, miavaka amin'ireo tanàna tsara tarehy ao Badajoz
Zava-mahatalanjona iray hafa amin'ireo tanàna tsara tarehy ao Badajoz dia Sherry ny Knights, izay tandindona lehibe indrindra dia ny lapa templar, naorina tamin’ny taonjato faha-XNUMX teo amin’ny sisa tavela tamin’ny trano mimanda arabo tranainy iray. Voahodidina rindrina misy vavahady roa izy io: Burgos sy Villa.
Fa Jerez dia fantatra amin'ny anarana hoe tanànan'ny tilikambo dimy noho ny fisian'izy ireo ao Fomba Baroque. Anisan'izany ny an'ny fiangonana Santa María de la Encarnación, San Miguel Arcángel ary San Bartolomé, ity farany dia mifandray amin'ny fomba fanao amin'ny Giralda any Seville.
Torak'izany koa, ny tanànan'i Extremadura dia manana tranoben'ny convent maro mahaliana. Ohatra, ny an'i Masindahy Augustin, Andriambavin'ny Fahatongavana ho nofo sy Renin'Andriamanitra. Ary miaraka amin'ireo hermita tsara tarehy maro toa an'i San Lázaro, Cristo de la Vera na Los Santos Mártires. Farany, aza adino ny mitsidika ny Trano tranombakoka Núñez de Balboa, toerana nahaterahan’io mpandresy malaza io.
Mandeha amin'ny lalàm-panorenana, any Fregenal de la Sierra
Mifanila indrindra amin'ny tanàna teo aloha amin'ny ilany atsimo atsinanana. Anisan'ireo tanàna tsara tarehy ao Badajoz koa izy io izay asehonay anao amin'ny toerana misy azy eo am-pototry ny Sierra Morena ary noho ny lova lehibe misy azy. Toy izany koa, manana a lapa templar nanomboka tamin’ny taonjato faha-XNUMX nahitana ny sisa tavela tamin’ny Romanina sy Visigoth tranainy kokoa, izay milaza fa naorina teo ambonin’ilay trano taloha kokoa izy io.
Mahavariana fa ao anatin’ny fefy misy azy ny kianjan’omby, izay efa tamin’ny taonjato faha-XNUMX. Ary, miraikitra amin'ny lapa, dia ny fiangonan'i Santa Maria, ary nisy daty tamin’ny XIII, na dia nisy alitara lehibe kokoa aza tamin’ny XVIII. Momba ny tempoly, manoro hevitra anao koa izahay mba hitsidika ny fiangonan'i Santa Catalina Mártir, Santa María de la Plaza ary Santa Ana, ary koa ny tranoben'i San Francisco, naverina tamin'ny laoniny vao haingana, ary San Ildefonso de la Compañía de Jesús.
Saingy, angamba, ny sandan'ny patrimonial lehibe an'i Fregenal de la Sierra, izay fitambarana ara-javakanto ara-tantara, dia ny azy. trano manor. Misongadina eo amin'izy ireo ny an'ny Penches, miaraka amin'ny patio Neo-Mudejar mahavariana. Fa ny lapan'ny Counts of Torrepilares, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ny Marquises of Riocabado, ny faha-XNUMX, ary ny Marchioness of Ferrera, dia tena tsara tarehy koa.
Farany, ny Loharano Fontanilla Nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy io ary eo afovoany dia misy toerana misy ny sarin'ny Virgen de la Guía, raha ny an'i María Miguel kosa dia manana angano momba ny mpifankatia roa amin'ny fomba Romeo sy Juliet.
Fiangonan'i San Francisco, any Albuquerque
Any avaratratsinanan'ny faritanin'i Badajoz no misy ny anarany avy amin'ny teny latinina albus quercus, izay midika hoe hazo oaka fotsy. Noho ny fahamaroan’ireo karazana hazo ireo eny amin’iny faritra iny, indrindra ny hazo oaka.
Raha ny marina dia efa nonenana hatramin'ny taloha i Alburquerque, araka ny asehon'ny sary hoso-doko amin'ny hantsana ao San Blas, nanomboka tamin'ny vanim-potoanan'ny alimo. Fa ny marika lehibe amin'ny tanànan'i Badajoz dia ny lapa volana, naorina tamin’ny faran’ny Moyen Âge ary mibahana azy io avy amin’ny havoana iray. Tsy izy irery anefa no ao an-toerana. Roa ambin'ny folo kilometatra eo ho eo no misy ny Lapan'i Azagala, eo akaikin'ny tohodranon'i La Peña del Águila.
Izy io koa dia vavolombelon'ny lasa tamin'ny Moyen Âge tao Albuquerque its fefy rindrina, misy tilikambo toa ny Famantaranandro na ny Cabera sy ny faritra Gothic, fantatra amin'ny anarana hoe Villa anatiny ary nambara ho complexe ara-tantara ara-javakanto. Ho an'ny ampahany, ny Fiangonan'i Santa Maria del Mercado Naorina teo anelanelan’ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX izy io, na dia nohavaozina aza tamin’ny taonjato faha-XNUMX. Ao anatiny dia afaka mahita sary sokitra sarobidy ny Cristo del Amparo ianao.
Tsy ny tempoly mahaliana ihany no azonao tsidihina any Albuquerque. Ny fiangonan'i San Mateo dia Renaissance, ny an'i San Francisco dia manana alitara Churrigueresque mahaliana, toy ny alitaran'ny Sanctuary of Our Lady of Carrión, ary ny hermitage an'i Nuestra Señora de la Soledad dia fomba baroque. Farany, Santa María del Castillo dia tempoly romanesque efa ela.
Ho fehiny, nanao dia niaraka taminao izahay namakivaky ny sasany tamin'ireo tanàna tsara tarehy any Badajoz. Saingy, araka ny voalazanay taminao tany am-piandohana, dia afaka mahita olona maro hafa ao amin'ny faritanin'i Extremadura ianao. Ohatra, Burguillos del Cerro, nambara ho toerana mahaliana ara-kolontsaina, fampisehoana, miaraka amin'ny lapany tamin'ny taonjato faha-XNUMX, Azaga, miaraka amin'ny fiangonany Nuestra Señora de la Consolación, izay lehibe indrindra ao amin'ny faritany manontolo, na Fresno Riverside, miaraka amin'ny tranony manaitra ao Vargas-Zúñiga. Tsy te hitsidika ireo zava-mahatalanjona rehetra ireo ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Tanàna tsara tarehy any Badajoz